२० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० रूपियाँमै विद्युत् !; विद्युतीय सवारी चार्जमा नयाँ महसुल | NepaleKhabar.com
२० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० रूपियाँमै विद्युत् !; विद्युतीय सवारी चार्जमा नयाँ महसुल
काठमाडौं, फागुन २९ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असाध्यै कम विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई सुविधा दिने लक्ष्यसहितको नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको छ । उक्त महसुल दरलाई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले आम सर्वसाधारणलाई आज जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणले तय गरेको महसुललाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन पाउने कानूनी प्रबन्ध रहेको छ ।